Ibrahimovic Oo Jawaab Naxli Ka Buuxo Ka Bixiyey Ganaax La Saaray
HomeWararka MaantaIbrahimovic Oo Jawaab Naxli Ka Buuxo Ka Bixiyey Ganaax La Saaray
Weeraryahanka kooxda PSG ee Zlatan Ibrahimovic ayaa jawaab kacsan ka bixiyey go’aan uu xidhiidhka dalka France kaga mamnuucay ciyaaraha dalkaas muddo afar kulan ah, kadib markii la sheegay uu aflagaado u geystay wadanka France iyo garsooreyaasha dalkaasba.
Inkasta oo hadalkaas ay dhibsadeen dad badan, isla markaana laga bixiyey jawaabo aanay u kala hadhin madaxda iyo shicibka dalkaas, haddana ciyaartoyga ayaa ku dooday in aanay ujeedadiisu ahayn sida loo fahmay, waxaanu bixiyey raalli-gelin aanay dadku ku qancin, taas oo keentay in xidhiidhku ganaaxan saaro.
Ibrahimovic ayaa bartiisa bulshada ku qoray markii uu go’aankaasi soo baxay ayaa waxa uu hadalkiisa ku bilaabay:
“Waxaan ku faraxsanahay in arrintani ay caddayn u tahay wixii aan sheegay. Dadku way arki karayaan imika wixii aan sheegayay.” Ayuu yidhi
Waxa uu intaa ku daray: “Waa wax lagu qoslo, doqonniimo ah oo aan ku sallaysnayn xirfadleyaasha, waana arrin sharaf dhac ku ah kubadda cagta.
“anigu waxaaban ka sii jeclaan lahaa in ay ganaax isaaraan inta ka hadhay horyaalka si aan dalxiis xili-horeba ugu baxo.
“Ganaaxayga daliil loo cuskaday ma jiro, hadalkayguna kuma uu soconin garsooraha, wada hadal kaliya ayaa na dhex maray garsooraha isaguna warbixintiisa ayuu ku caddeeyey.” Ayuu raaciyey.
Ganaaxa la saaray Ibrahimovic ayaa ku koobnaanaya horyaalka wadanka France ee Ligue 1 oo kaliya, waxana loo ogolaaday ciyaarta faynalka ee koobka France Cup ee ay wada yeelan doonaan PSG iyo Bastia. Waxa kale oo uu Ibrahimovic ka maqnaan doonaa is-aragga hore ee ciyaarta Champions League ee toddobadkan ay PSG la ciyaari doonto Barcelona, kadib casaan la siiyey kulankii mucjisada noqday ee Chelsea.
Joe Hart, Toure, Fernando Iyo Bony Oo Mustaqbalkoodu Mugdi Galay
04/03/2016 Abdiwahab Ahmed
Hoggaanka Kooxda Somaliland Ee u Dhoofaya Ruushka Oo Caddeeyey Ujeeddada ay uga qayb gelayaan tartanka Abkhazia
25/05/2016 Abdiwahab Ahmed